Ibu akpa China-US arịgoro dollar US 20,000, ogologo oge ole ka ọ ga-aga n'ihu?
Ngwa ahịa mbupu butere omume a ma wusie ike, na Orient Overseas International na -ebili 3.66%, na Mbupu Pacific bilitere karịa 3%. Dị ka Reuters si kwuo, n'ihi mmụba na -aga n'ihu nke iwu ndị na -ere ahịa tupu ọbịbịa nke oge ịzụ ahịa US, na -abawanye nrụgide na sistemụ ọkọnọ ụwa,ọnụego ibu igbe sitere na China ruo US arịgoro n'ọkwa ọhụrụ nke ihe karịrị US $ 20,000 kwa igbe dị mita 40..
Mgbasa ngwa ngwa nke nje Delta na -agbasa n'ọtụtụ mba emeela ka mbelata ọnụego mgbanwe akpa ụwa niile. Ajọ ifufe na nso nso a na mpaghara ndịda ụsọ oké osimiri China nwekwara mmetụta. Philip Damas, onye isi njikwa Drewry, ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem ụgbọ mmiri kwuru, "Anyị ahụbeghị nke a na ụlọ ọrụ na -ebupu ụgbọ mmiri ihe karịrị afọ 30. E mere atụmatụ na ọ ga -adịgide ruo afọ 2022 nke Afọ Ọhụrụ China ”!
Kemgbe ọnwa Mee nke afọ gara aga, Drewry Global Container Index arịgoro 382%. Ịga n'ihu na -abawanye na ọnụego ibu mmiri na -apụtakwa mmụba nke uru ụlọ ọrụ mbupu. Mweghachi akụ na ụba n'akụkụ ụwa chọrọ, ahaghị nhata nke mbubata na mbupụ, mbelata arụmọrụ ntụgharị akpa, yana ikike ụgbọ mmiri siri ike, mere ka nsogbu nke ụkọ akpa ka njọ.
Mmetụta nke ibu ibu
Dị ka nnukwu data nke Organizationtù Na -ahụ Maka Nri nke Mba Ndị Dị n'Otu si kwuo, ndepụta nri ụwa na -arị elu ruo ọnwa iri na abụọ n'usoro. A ga -ejikwa ụgbọ mmiri na -ebugharị ngwaahịa ugbo na ngwa igwe, ọnụ ahịa akụrụngwa na -abawanye, nke na -adịghị mma maka ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ụwa. Na ọdụ ụgbọ mmiri ndị America nwere nnukwu ibu ibu.
N'ihi ogologo oge ọzụzụ na enweghị nchekwa na ọrụ maka ndị na -anya ụgbọ mmiri n'ihi ọrịa na -efe efe, enwere nnukwu ụkọ nke ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ọhụrụ, ọnụ ọgụgụ ndị na -ebugharị ụgbọ mmiri belatara nke ukwuu. Ụkọ nke ndị na -akwọ ụgbọ mmiri na -amachibidokwa mwepụ nke ikike mbupu. Maka mmụba a na -achọ n'ahịa North America, yana ịrị elu nke ọnụ ahịa mmanụ zuru ụwa ọnụ, mmụba dị n'ahịa North America ga -akawanye njọ.
Ụgwọ mbupu ka na -arị elu
N'ịgbaso mgbanwe na ọnụ ahịa nke nnukwu ngwaahịa dị ka ọla na igwe, mmụba nke ọnụahịa mbupu gburugburu a abụrụla ebe ndị ọzọ niile lekwasịrị anya. Dị ka ndị na -ahụ maka ụlọ ọrụ si kwuo, n'otu aka, ọnụ ahịa ebuola arịgoro elu, nke mere ka ọnụ ahịa ihe mbubata dị ukwuu rịa elu. N'aka nke ọzọ, mkpọchi nke ibu na -agbatị ogologo oge ma na -abawanye ọnụ ahịa na -agbanwe agbanwe.
Yabụ, mkpọchi ọdụ ụgbọ mmiri na ịrị elu ọnụ ahịa mbupu ga -adịru?
Agencylọ ọrụ ahụ kwenyere na usoro ịtụgharị akpa na 2020 ga -abụ nke na -ahazighị, na a ga -enwe usoro atọ nke mgbochi mgbochi nloghachi efu, mbubata na mbupụ na -ezughị oke, na ụkọ arịa ga -abawanye, nke ga -ebelata oke ọkọnọ. Nweta na ihe na -aga n'ihu na -esiwanye ike, ọnụego ibu ntụpọ ga -ebili nke ọma. , Ọchịchọ Europe na America na -aga n'ihu,na ọnụego ibu dị elu nwere ike ịga n'ihu ruo nkeji nke atọ nke 2021.
“Ọnụ ahịa ahịa mbupu ugbu a nọ n'okirikiri siri ike nke ịrị elu. A na -ebu amụma na ka ọ na -erule njedebe nke 2023, ọnụ ahịa ahịa niile nwere ike banye na mpaghara oku. ” Tan Tian kwuru na ahịa mbupu nwekwara okirikiri, na -abụkarị okirikiri nke 3 ruo afọ 5. Akụkụ abụọ nke mbupu na ihe na -ebubata ya na -aga nke ọma, na mgbake n'akụkụ a na -achọkarị na -akpali ike nke ndị na -ebubata ya ịbanye na okirikiri uto n'ime afọ abụọ ma ọ bụ atọ.
N'oge na-adịbeghị anya, S&P Global Platts Global Executive Editor-in-Chief of Container Shipping Huang Baoying kwuru na N'ajụjụ ọnụ CCTV, “A na -atụ anya na ọnụego ibu akpa ga -aga n'ihu na -abawanye ruo ngwụcha afọ a, ọ ga -adakwa na nkeji mbụ nke afọ na -abịa. Ya mere, ọnụego ibu akpa ga -anọ ogologo oge. Ọ dị elu. ”
E wepụtara ISI ISE NKE IZU AKA CHINA